National Power News:: मनको दुःख पीडा भुल्न सक्ने खालको लोकगीत होस ; गायिका कान्छी रनु घतानी National Power News:: मनको दुःख पीडा भुल्न सक्ने खालको लोकगीत होस ; गायिका कान्छी रनु घतानी
मनको दुःख पीडा भुल्न सक्ने खालको लोकगीत होस ; गायिका कान्छी रनु घतानी
२७ , चैत / काभ्रेपलान्चोक – सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसेर नगरपालिका वडा नम्बर १ घोर्थलीमा जन्मनुभएकि गायिका कान्छी रनु घतानी मुख्य तथा काठे लोक दोहोरी गायिकाको रुपमा छोटो समयमै चर्चामा आउन सफल गायिकाहरु मध्ये पर्नुहुन्छ । गित गाउन , प्रोग्राममा हिडन , नाटक गर्ने , डान्स गर्ने मन पराउने गायिका घतानी आज भोलि निकै ब्यस्त देखिनु हुन्छ । प्रस्तुत छ अरबिन्द्र गौतमले गायिका कान्छी रनु घतानीसँग गरेको छोटो कुराकानी
आज भोली गित सँगितको साथ साथै सिलाई बुनाई अनि हल्का प्रोग्राम तिर ब्यस्त छु ।
म बिदेशी भुमिमा तीन बर्ष बसे बिदेशमा भएपनि गित सँगित लाई धेरै माया गर्थे । सुरु सुरुमा म अन्लाईन रोधी घरमा गाउने गर्थे । अनि मेरो आदणीय सर ईश्वर सापकोटासँग भेट भयो अनि मलाई उहाँले यस क्षेत्रमा आउने अवसर दिनु भयो र बिस्तारै म यो क्षेत्रमा लागे
मैले अहिलेसम्म चार ओटा गित गायको छु अरु बिस्तारै आउने क्रममा छन् ।
म लोक दोहोरी गायिका हु । लोक दोहोरीमा पनि
काठे लोक गितहरु बढी गाउछु ।
गायनबाट म एकदम सन्तुष्ट छु भन्नू पर्छ । सन्तुष्ट भएको कारणले गर्दा नै आज यहाँ सम्म छु ।
० बाच्नलाई सकिन्छ ?
गायन बाट बाच्नलाई अलि गार्‍हो छ । गायन बाट एउटा रहर पुरा गर्ने मात्र हो ।
मेरो आदरणीय बाबा आदरणीय सर ईश्वोर सापकोटा र मेरो परिवारको साथ सहयोग प्रेरणाबाट गायन क्षेत्रमा लाग्न पाए।
सबैको प्यारी , सबैले माया गर्नी ,सबैको राम्रो , सबैले सम्झिने , धेरै दर्सकहरुको मन जित्न सफ़ल गायिका बन्ने मन छ ।
ठुलो सानो सबै लाई मन पर्ने जुन लोकगीत सुनेर मनको दुःख पीडा भुल्न सक्ने लोकगीत होस् जस्तो लाग्छ ।
नाइ मेरो बिबाह भएको छैन ।
० आफु लाई लायकको केटा हेर्नू पर्ने भयो भने कस्तो टाइपको हेर्नू हुन्छ ?
मनको धेरै राम्रो , धनी होस् एक अर्काको मन मिल्ने कुनै स्वार्थ नराख्ने , सबै सँग राम्रो बोली बचन गर्ने , जिन्दगीमा कहिले धोका नदिने होस् यस्तो टाइपको हेर्ने मन छ ।
म गित सँगितको साथ साथै केहि सिप सिकेर आफैले केहि गर्छु भन्ने योजना छ ।
मलाई पर्व विशेष गित नै ठिक लाग्छ ।
तपाईं लगायत तपाईंको मिडियालाई मेरा मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ।